Spotify नि: शुल्क योजना को उपयोगकर्ताहरु लाई अधिक लाभ दिन्छ ग्याजेट समाचार
Spotify यसको निःशुल्क योजना अधिक लचिलो बनाउन को लागी योजना गरीरहेको छ
गत हप्ता Spotify को लागी ठूलो महत्व थियोन्यु योर्कमा स्विडेनी कम्पनी सार्वजनिक भएको छ। थप रूपमा, यो आशा गरिन्छ कि केही हप्तामा उनीहरूले आफ्नो पहिलो उपकरण प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसैले यो कम्पनी को लागी व्यस्त केहि हप्ता भयो। अब, तिनीहरूको योजना को बारे मा नयाँ समाचार छ। देखिन्छ जस्तो देखिन्छ कि तिनीहरूaमा काम गर्दैछन् तपाइँको नि: शुल्क स्ट्रिमिंग योजना अधिक लचिलो बनाउने.
स्पोटिफाई योजनाहरू हुन्छन् किनकी नि: शुल्क स्ट्रिमि service सेवा प्रयोग गर्न प्रयोगकर्ताहरूको लागि सजिलो छ। विशेष गरी स्मार्टफोनको मामलामा। यस तरिकाबाट उनीहरूले सेवामा अनुयायीहरू पाउने आशा राख्छन्।
अहिलेसम्म, प्रयोगकर्ताहरू जसले उनीहरूको स्मार्टफोनमा निःशुल्क सेवा (विज्ञापनको साथ) अप्ट इन गर्छन् उनीहरूले प्लेलिस्ट वा एल्बममा सुन्न चाहेको गीतहरू छान्न सक्दैनन्।। बरु, तिनीहरूले शफल मोडमा सबै कुरा सुन्नु पर्छ। केहि चीज जुन प्रयोगकर्ताहरूका लागि असहज हुन्छ।
तर यस्तो देखिन्छ कि स्पोटिफिले यसको नयाँ योजनाको साथ यसलाई परिवर्तन गर्न गइरहेको छ।। तिनीहरू चाहन्छन् कि प्रयोगकर्ताहरू यसमा धेरै नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्। त्यसोभए तिनीहरू जुनसुकै बेला सुन्न चाहेको छनौट गर्न सक्षम हुनेछन्। यसैले तिनीहरू आफूले नचाहेका गीतहरू सुन्न बाध्य हुनेछैनन्।
यो स्विडेनी कम्पनीको रणनीति हो जुन उनीहरूसँग प्लेटफर्ममा नयाँ प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त गर्ने आशा छ। हाल Spotify मा १ 157 करोड users० लाख प्रयोगकर्ताहरू छन्। यो आंकडाको करिब 71१ करोडले सशुल्क सदस्यता प्रयोग गर्दछन, जुन ठूलो संख्या हो। खाताको यस प्रकार मा लगभग आधा शर्त।
तसर्थ, यदि नयाँ प्रयोगकर्ताहरू प्लेटफर्ममा आइपुगे, तिनीहरू नि: शुल्क योजना प्रयोग गरेर सुरू गर्न सक्दछन् तर अन्तमा स्पोटिफाईमा भुक्तान गरिएको योजनामा ​​स्विच गर्नुहोस्। कम्तिमा पनि यो नयाँ रणनीतिको साथ स्विडेनी कम्पनीले हासिल गर्ने आशा राखेको छ। तपाइँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » Spotify यसको निःशुल्क योजना अधिक लचिलो बनाउन को लागी योजना गरीरहेको छ
प्लेस्टेशन of को सुरूवात भइरहेको देखि टाढा छ
सामसुले एएमडी फ्रीस्सिन्कको साथ नयाँ टिभीहरूसँग गेमि .लाई लक्षित गर्दछ